No No..No Thank You..
Scandal: Horsemeat in Burgers!
Salaam Beautiful, Rainy, Wildly Windy Sunday..
PROOF of RACIAL DISCRIMINATION practiced by Myanmar Government
Posted: 03 Feb 2013 09:55 AM PST
Posted: 03 Feb 2013 06:58 AM PST
Posted: 03 Feb 2013 03:58 AM PST
A birthday guy receivedabirthday wish via sms fromastranger..there wasahandphone number left.
Aside from saying Happy Birthday/Selamat Harijadi with the semoga sejahtera sentiasa, he was reminded..Sayangi Selangor..Yakini BN.
Gosh..don't get anybody feel annoyed.
First of all, his privacy was invaded.
What other personal details of this birthday guy does the stranger possess?
You know..this is really not nice.
Definitely not the personal touch for us BN to garner potential votes.
BN Selangor is working hard but we're not dealing with robots.
Tread carefully but not to the point of freaking out the voters.
Whoever the hell who's applying this campaign technique better immediately stop..
Quite unethical..we shouldn't do this.
Findadifferent approach to woo the voter..
His wife hasafrail old grandmother..
Go visit and cheer up the old lady..that may beabit more sincere.
Of course there are secondary causes of cancer but lack of oxygen seems to be the #1. He then goes on to elaborate that "the prime cause of cancer is the replacement of the respiration of oxygen in normal body cells byafermentation of sugar. All normal body cells meet their energy needs by respiration of oxygen, whereas cancer cells meet their energy needs in great part by fermentation."
Lack of proper building blocks for cell walls that don't allow nutrients into the cells.
The Guardian carriedareport AT THIS LINK about some shocking news.
According to that report,afast food company said test results at production plant revealed 'very small trace levels' of horse DNA in its products.
CLICK HERE to read all about the fast food company which made that statement.
Posted: 03 Feb 2013 07:05 AM PST
"Lebih baik Hasan mengajukan perkara itu ke SPRM, buat apa hanya cakap-cakap sahaja, Kerajaan Negeri tidak menggunakan duit seperti yang didakwanya," katanya.
"Saya fikir dia tidak belajar 'accounting' (bidang akaun), jangan malukan penjawat awam," katanya lagi.
Posted: 03 Feb 2013 02:56 AM PST
The Digital Awakening turned ten last Monday. It slipped my mind until just now when I was perching on the porcelain throne. Whataway to remember my blog's anniversary.
Posted: 03 Feb 2013 02:11 AM PST
To be fair with Miki, Rafa's first solid food was also avocado puree with expressed breastmilk. And Rafa's verdict? Nope, totally didn't like it. I wondered if Rafa is the type of child that detests solid food and preferred milk alone until much later in their babyhood, hmmm?
The next day I prepared something else that I thought would be more appealing to his taste buds – carrot and pumpkin puree, and guess what, Rafa ateawhole lot! Wow! For someone who has never tasted anything but fluid before,ababy's palate can sure haveamind of its own eh?
Every couple of days I would be preparing two or three types of babyfood for Rafa. It should be enough for the next2or3days. I kept the puree in ready-to-eat portions in the freezer and heat it up before consumption. To date Rafa ate home-cooked food only exceptacouple if Heinz baby food and rusks that's just too handy when we travel.
I will only introduce animal protein to Rafa once he turns 8 months. So until then, it is all vegetarian baby! Easier to digest ya.. Big Bro Miki had almost the same thing when he wasababy, vege and fruits as first food for several months in his life and somehow I think that's why he loves vegetables now. Hopefully Rafa will also follow suit and will not beapicky eater later on.
Posted: 03 Feb 2013 01:54 AM PST
Source: ကုရ်အာန်အသိပညာပြန့်ပွားရေးကော်မတီ shared Baydar Lam's photo.
ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ် ပါချူပ်(ငြိမ်း) သမိုင်းပညာရှင် ဦးတင်စိုးမှ မန်းတလေး နန်းတွင်း၌ ဗလီနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထား မတွေ့ရှိခဲ့ဟု ပြောကြားခဲ့တာကို ၈.၁၁.၂၀၁၂ ရက်ထုတ် NEWSWEEK ဂျာနယ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အထောက်အထားဆိုတာက အလကားနေရင်းသူဆီရောက်လာမှာတော့ မဟုတ်ဖူးလေ..ကိုယ်ကလေ့လာရမှာပေါ. သူမတွေ.တာနဲ.ပဲမရှိရတော့ဘူးလား?? ကျနော်မေးချင်ပါသေးတယ် သမိုင်းပညာရှင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင် ကျမ်းပြုအရာရှိ၊အရှေ.ဖျားနှင့်မြန်.မာ့သမိုင်းကထိက ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှုးကြီး ဘရှင် ကိုတော့ကြားဖူးပါလား?ဒါတောင်မကြားဖူး ဖူးဆိုရင်တော့ ……….
အောက်မှာဗိုလ်မှုးကြီးဘရှင်ရဲ.မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို.အား ရှေးမြန်မာမင်းများက ချီးမြင့်ခဲ့ပုံစာအုပ်ထဲကပုံနဲ.ရာဇဝင်သုတေသီ ရွှေဘိုဦးဘဦး၏ရွှေမန်းနှစ် ၁၀၀ ပြည့်မြန်မာမွတ်စလင်အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ထဲကစာတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted: 03 Feb 2013 01:42 AM PST
Posted: 03 Feb 2013 01:13 AM PST
Protesters chanted "it is the same crisis ... the Brotherhood areagroup of thieves" and "police are thugs," and held banners reading, "Morsy, leave with you Interior Minister" and "Mr. Prosecutor General, Morsy is attacking defenseless people."
Inapress statement, the ministry described the incident as an "individual act" that does not represent police or security forces on the whole, describing them as making every effort "to protect the nation's security and stability, and sacrifice their lives for the security of the citizen."
The statement added that an investigation is underway and that it would announce its findings to the public. But then, Egypt's old ways madeacomeback:
According to prosecutors, Saber was also initially beaten by security forces who thought he wasademonstrator. The prosecutors' claims fly in the face of overwhelming reports and video evidence to the contrary. A video from the Al-Hayat satellite channel showed the protester being assaulted by security forces, and the Interior Ministry releasedastatement expressing regret over the incident.
What's Happening to Yemen's Forgotten Christians
Posted: 03 Feb 2013 01:02 AM PST
A thief would lose his right hand. Those accused of burglary would lose both their right hand and left foot. On 21 December last year, people were assembled, as they had been several times before, and told to watch. "No one was allowed to speak," said Issa Alzouma. "Then they cut off my hand withaknife."
"The doctor had to cut in and remove flesh because it was infected," he said. "Under the bandage you can see my bones. It hurts and I feel as if my bones are coming out." Hat tip: Eye On The World More...
Posted: 02 Feb 2013 05:03 PM PST
Namun menurutnya, pemimpin Umno-BN terdahulu sering menabur'janji manis' untuk menyerahkan hak milik tanah kepada penduduk setiap kali menjelang pilihanraya, namun hasrat itu tidak pernah ditunaikan.
"Alhamdulillah, Kerajaan PR Selangor mendengar masalah rakyat dan cuba membantu sedaya-upaya untuk memberi geran tanah kepada penduduk di kawasan ini.
Saya benar-benar bersyukur," katanya.
"Saya sangat gembira dan bersyukur atas pemberian milikan tanah ini. Tiada apa yang mampu saya ungkapkan selain ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri khususnya Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Kerajaan PR Selangor berjaya buktikan keprihatinan mereka," ujarnya.
"Mereka ini bertahun-tahun memohon dan menjadi peneroka di sini, malah ada di kalangan mereka yang meninggal dunia. Proses untuk mendapatkan geran ini begitu rumit kerana tanah yang didiami penduduk adalah tanah Keretapi Tanah Melayu (KTM), namun kabinet menyerahkannya kepada Kerajaan Negeri.
"Saya memantau masalah ini dan kebanyakan daripada mereka menunggu lama. Alhamdulillah hasil usaha berterusan, geran itu akhirnya dimiliki oleh penduduk setelah menunggu lama," katanya.
Posted: 02 Feb 2013 09:48 PM PST
Posted: 02 Feb 2013 08:20 PM PST
See IF Buddhist….Myanmar Gov IS Willing to accept…If Muslim BIG NO. This is the PROOF of RACIAL DISCRIMINATION practiced by Myanmar Government.
လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းကို နည်းမျိုးစုံနှင့် ဖန်တီးပြီး လူတွေသေကြတာ မဝသေးဘူးလား? by Aung Tin on Saturday, February 2, 2013 at 10:06pm ·
လက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုသူတွေဟာ သွေးနှင့် ဝမ်း မခွဲခြားတတ်သေးတာလား။ လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းတွေကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေချင်တာလား ဆိုတာ အောက်ပါသတင်းကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာပြည်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခွာသွားရတဲ့ တိုင်းရင်းသားမှန်သမျှက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်အခြေစိုက်ခွင့် ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုစိစစ်ပြီး ပြန်အခြေစိုက်ကြမှာလဲက မေးကိုမေးရမဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် တနံတလျှားမှာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကို ခွပြီးမနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက်အရ ဟိုဖက်မှာနေသူတွေက ဟိုနိုင်ငံသား၊ ဒီဖက်နေသူတွေက ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ကြရတာပါ။
ဟိုဖက်မှာနေတဲ့ မျိုးနွယ်တူ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းသာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပေါ့။ တိုင်းပြည်ပျက်သွားမှာပေါ့။ ဒါဆို ဝတွေ၊ ကိုးကန့်တွေကိုလည်း လက်ခံလိုက်ကြလေ။ တရုပ်ပြည်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ တရုပ်တွေကတော့ ဝဆိုပြီး၊ ကိုးကန့်ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ကို လာကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကို ဝ၊ ကိုးကန့်အမည်တွေနဲ့ ဝင်လာမဲ့ တရုပ်တွေက မြန်မာပြည်မှာ ပိုအခွင့်အလမ်းရှိမှ လာမှာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ဟိုမှာ အဆင်ပြေလျှက်နဲ့ ဟိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေ ရနေလျှက်နဲ့ မရေရာ မသေချာသေးတဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာနေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ရခိုင်သမိုင်းအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကော၊ မွတ်စလင်တွေကော ဘင်္ဂလားဒက်ကို စစ်ကြောင့် ပြေးကြ၊ ပြန်ဝင်ကြရှိနေပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ဘင်္ဂလားဒက်မှာ အခြေစိုက်နေထိုင်နေကြတဲ့ ရခိုင်တွေက ဘင်္ဂလားဒက်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးနေကြပြီး၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ စစ်ဗိုလ်တွေ၊ စီးပွါးရေး၊ လယ်ယာစသည်တွေကို တန်းတူလုပ်ကိုင်ခွင့် ရနေကြသူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီလို့ အခေါ်ခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကသာ ဘင်္ဂလားဒက်က နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံတာပါ။ ရခိုင်တွေမှာက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေတောင် ရနေကြပါတယ်။ ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် ဖြစ်နေတဲ့၊ သွေးညှီနံ့တွေ နံနေဆဲဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခုနေခါ မြန်မာပြည်ထက် လူ့အခွင့်အရေးအရကော၊ စီးပွါးရေး၊ လုံခြုံရေးအရကော အဘက်ဘက်က မြင့်နေ၊ ခိုင်လုံနေသူ ရခိုင်လူမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက် တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက် ပြန်လာကြမှာလဲဆိုတာကလဲ မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထက် စီးပွါးရေးသာနေတဲ့အတွက် ဘယ်ဘင်္ဂလီကကော ရိုဟင်ဂျာယောင်ဆောင်ပြီး ပေါ်တာအဆွဲခံဖို့၊ အဆဲခံ၊ အနှိမ်ခံဖို့ မြန်မာပြည်ကို ဝင်လာကြမှာလဲ။ လက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒက် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မြန်မာအစိုးရ လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေတောင် မြန်မာပြည်ကို မပြန်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေတာ မတွေ့ကြဘူးလား။ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားတတ်ကြသူ၊ အမှန်တရားကို လက်ခံစဉ်းစားချင်သူ နည်းပါးလှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပါ။
ဘင်္ဂလားဒက်မှာ အခြေကျနေတဲ့ ရခိုင်တွေထဲက လာခြင်းလာရင် ဘယ်လိုလူတွေက လာမှာလဲ။ ဘာအတွက် ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လာကြမှာလဲ။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆိုသူတွေကကော အခုလို အထိကရုဏ်းတွေဖြစ်နေပြီး မူလနေသူတွေကိုတောင် ပြန်လည်နေရာချထားရေးကို ပီပီပြင်ပြင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးတဲ့ကာလမှာ ဘာအတွက် အခုလို ရခိုင်မှာ အခြေကျပြီးသူတွေကို အရေးတကြီး ပြန်ခေါ်ဖို့ စီမံချက်ချနေတာလဲ။ ကြည့်ရတာ လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းကို နည်းမျိုးစုံနှင့် ဖန်တီးပြီး လူတွေသေကြတာ မဝသေးဘူးနှင့် တူပါတယ်။
Reference:သတင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် တိုင်းရင်းသားများ ရခိုင်တွင် အခြေပြန်ချရေး အစိုးရ ကူညီမည်
ခင်ဦးသာ| February 1, 2013 |Irrawaddy
"ရခိုင်နဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေအပြင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင် ဘယ်တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ဖြစ် လက်ခံပေးမှာပါ။ မိသားစု တခုအတွက် နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းတခု၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် လယ် ၂ ဧကလည်း ပေးမယ်" ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
"အဓိက စိုးရိမ်တာ လုံခြုံရေးပါ။ အရင်ကလည်း အစိုးရက အဲဒီလိုပြောတော့ ပြောင်းသွားတဲ့ မိသားစုတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံခြုံမှု မရှိတော့ ဒီဘက် ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ အလုပ်အကိုင်လည်း ရှားပါးတော့ ရေရှည်မနေနိုင်တဲ့ အတွက် ပြန်လာတယ်။ အစိုးရက လယ်လုပ်ဖို့ နွား ၂ ကောင်ပေးမယ် ပြောပြီး ၁ ကောင်ပဲပေးတော့ အဆင်မပြေကြဘူးပေါ့" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
"မောင်တောမှာ ဘင်္ဂါလီတွေတွေရဲ့ ရန်ကို ကြောက်ရသလို ရန်ကုန်ဘက်က နေရာချပေးထားတဲ့ သူတွေကလည်းပဲ အများစုက လူဆိုး၊ လူမိုက်တွေများတော့ သူတို့ကိုလည်း စိုးရိမ်တယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေအတွက် အစိုးရက လုံခြုံရေးကို သေချာ တာဝန်ယူပေးတာ မရှိဘူး" ဟု ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အနည်းငယ်က မောင်တောသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချနေထိုင်သူတဦးက ပြောသည်။